ဂျီတော. ဆိုးကျိုးလက်တွေ. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဂျီတော. ဆိုးကျိုးလက်တွေ.
Posted by ရွှေဘိုသား on Jun 25, 2011 in News | 32 comments
အခုကျွန်တော်တို.ဆီကလူငယ်တော်တော်များများ ချက်တင်ကိုတော်တော်ကိုစွဲလမ်းစွာအသုံးပြုနေကြတယ်ဆိုတာတော. အကုန်လုံးသိကြမှာပါနော်
တစ်ချို.ကလည်း ကောင်းတဲ.ဘက်မှာပြောကြတယ်နော် ဥပမာ အဝေးရောက်နေတဲ. အစ်ကိုတွေ အစ်မတွေ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ. အဆက်သွယ်ရအောင်သုံးကြ
တာပေါ.ဗျ။ တစ်ချို.ကတော.လည်း အီစီကလီထုကြတာပေါ.နော်။ အင်တာနက်ခေတ်ကြီးရောက်နေတာတော.ဟုတ်ပါပြီ တကယ်ကိုအကျိုးရှိအောင် အသုံးချတတ်မှ
အကျိုးရှိမှာပါ။ ဒါ.မို.လည်း အင်တာနက်သင်တန်းတစ်ချို.ဆီက လက်ကမ်းစာစောင်တွေမှာရေးထားကြတာပေါ.(အင်တာနက်ကို ချက်တင်ထိုင်၇ုံ ဂျီမေးပို.ရုံပဲလို.သင်ထင်ပါသလား)လို.ရေးပြီးကြောငြာကြတာပေါ.ဗျာ။ ကျွန်တော်တို.လည်း အမြဲတွေ.နေရတယ်ဗျ အင်တာနက်ဆိုင်တွေ သွားလို.ကတော.အမြဲလိုလိုကိုကြားနေရတာပါ အီစီကလီအသံတွေပေါ.ဗျာ ကျွန်တော်တို.ကတော. အဲလိုပြောဖို.ဆိုရင် ဘေးလူတွေကြားမှာကို ရှက်တယ်ဗျ
ချက်တင်နဲ.ကြိုက်ကြ ချိန်းတွေ.ကြနဲ.ဘာများအကျိုးရှိလို.လဲဗျာ ဒါကလည်း တိုးတက်လာတာနဲ.အမျှ ကောင်းတာရော ဆိုးတာရော ရောပါလာတာပါပဲ။
အသုံးချတဲ.လူပေါ်မှာပဲ မူတည်ပြီး အကောင်းအဆိုး ကွဲပြားသွားတာပါ။
ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်း၇ဲ. ညီမလေးတစ်ယောက် ဒီချက်တင်သုံးရင်းပဲ ဘ၀ပျက်သွားတာ အခုတလောကမှ ဖြစ်သွားတာပါ ကျွန်တော်လည်း အရင်ကတော.
ဒီဂျီတော.ချက်တင်အကြောင်းရေးဖို. စိတ်ကူးမရှိပါဘူး အခုသူငယ်ချင်းညီမလေးလို မဖြစ်ကြရအောင် ရေးပြီးတင်ရတာပါ။
ကျွန်တော်.သူငယ်ချင်းညီမလေးက အခုမှ အသက်က 19 ဆယ်တန်းအောင်ပြီးခါစလေးပေါ. သူလည်းဒီလိုပဲ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်မှာ
အင်တာနက်သင်တန်းတက်ပေါ. သင်တန်းကတက်လာတာကလည်း ချက်တင်တစ်ခုကောင်းကောင်းတတ်တာပါပဲ အဲဒီချက်တင်ကြောင်.ပဲ သူအခုလိုဖြစ်သွားတာပါ
တွေးကြည်.ရင် ပြဿနာကို ပိုက်ဆံပေးသင်ယူသလိုကိုဖြစ်နေတာပါပဲ
သူကအင်တာနက်ထဲကနေ မန္တလေးက ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ.တွေ.ပြီး ပုံတွေအပြန်အလှန်ပို.ပြီး ကြိုက်ကြတယ်ပေါ. ဒါနဲ. စာမေးပွဲအောင်စာရင်းထွက်ပြီး
စာမေးပွဲအောင်တော. သူငယ်ချင်းတွေနဲ. ဘုရားဖူး မန္တလေးကိုသွားတာပေါ. အဲဒီမှာ သူ.ရဲ.အွန်လိုင်းချစ်သူလေးနဲ.အပြင်မှာချိန်းတွေ.တာပေါ. ဟိုကျတော. ကောင်လေးကပြန်မပို.တော.ဘူးတဲ. ကောင်မလေးကလည်း မြို.ကကိုယ်.မြို.မဟုတ်တော.ဘယ်မှမသွားတတ်မလာတတ်နဲ.ပေါ. ဒီလိုနဲ. သူ.ချစ်သူနဲ. တူတူနေတာပေါ. တည်းခိုးခန်းမှာ 10 ရက်လောက်တူတူနေကြတာတဲ. အခုကျမှ ကောင်လေးက သူ.အိမ်က မယူခိုင်းသေးဘူး ငယ်သေးတယ်လို.ပြောတယ်ဆိုပြီး
ကောင်မလေးကို ပိုက်ဆံလေး လမ်းစရိတ် 40000 ပေးပြီး နောက် တစ်နှစ်လောက်နေမှယူမယ်ဆိုပြီး ကားနဲ.တင်ပေးလိုက်တာပါပဲ ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို.
ကောင်းလဲနော် ချက်တင်ကပေးတဲ. ဆိုးကျိုးကိုပြောတာပါ။ ဘ၀ပျက်တယ်လေ ဒါကလည်းချက်တင်ပဲ အပြစ်ပြောလို.မရဘူးလေ အသုံးချတဲ. လူပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီး
ပြောင်းလဲသွားတာကို အဆိုးလားအကောင်းလားဆိုတာကို။ လူငယ်တွေချက်တင်ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်း မသုံးသင်.ပါဘူး ကိုယ်.အသိသူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ.
ချက်တာလောက်ပဲကောင်းပါတယ်။ အင်တာနက်မှာ သတင်းတွေဖတ် ဟာသတွေဖတ်ပေါ.ဗျာ နိုင်ငံခြားလို အဆင်.မြင်.မသုံးတတ်တောင် သတင်းလေးလောက်တော.ဖတ် တတ်သင်.ပါတယ် ကျွန်တော်အမြဲကြုံတွေ.နေရပါတယ် တစ်ခါလာလည်း ဂျီတော.ကိုပဲ သုံးခုလေးခုလောက်ဖွင်.ပြီးချက်ကြတာပါ
ဖောင်.ကျတော. မြန်မာ ကနေ အင်္ဂလိပ် တောင် Crtl+Shift (သို.) Alt+Shift ပါပဲ ဒီလောက်တောင်မသိကြပါဘူး ချက်တာကြတော. သုံးလေးယောက်လက်မလည်
အောင်ချက်တတ်ပါတယ် တစ်ချို.ရှိသေးတယ် စာလုံးအကြီး ဖြစ်နေတာ Caps Lock ပွင်.နေလို.ဆိုတာ ဒီကွန်ပျူတာ အခြေခံလေးလောက်တောင်မသိကြပါဘူး
မသိဆိုလည်း စိတ်ကလည်းမ၀င်စားကြဘူးလေ ချက်တာလောက်ပဲစိတ်ဝင်စားကြတာကိုးနော် သူများနိုင်ငံတွေလည်း ရှိပါတယ် အဆိုးနဲ.အကောင်းပါပဲ
ဒါကလည်း အသုံးချတဲ.လူတွေပေါ်မှာပဲ အများကြီးမူတည်တယ်လို.ထင်ပါတယ်
အဲဒီအကြောင်း စဉ်းစားပြီး ကားစီလာတုန်းရှိသေးတယ် အဓိပတိ ကားပေါ်က ရုပ်မြင်သံကြား မီဒီယာ တစ်ခုက သူတို.အမေး သူတို.အဖြေ ဆိုတဲ.အစီအစဉ်မှာ
ပါလာတာက မေးတာက လူငယ်တွေ ဂျီတော.ကို ဘာ.ကြောင်.စွဲစွဲလမ်းလမ်းသုံးကြတာလည်းဆိုတာပါ
ဖြေတဲ.သူတွေကလည်း ပေါက်ကရတွေပါပဲ ကျွန်တော်မှတ်မိသလောက်တော. အဝေးရောက် ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေနဲ.ဆက်သွယ်ရေး လွယ်ကူလို.ဆိုတဲ.လူတစ်ယောက်မှ မပါဘူးဗျ။ ဘာဖြေထားသလဲဆိုတော. တစ်ယောက်က အီစီကလီ လုပ်လို.ရလို.သုံးတာပါတဲ.။ တစ်ယောက်ကျတော.လည်း
အိုင်တီ ခေတ်ကြီးမှာ ချက်တင်မှမသုံးရင် ခေတ်နောက်ကျမှာပေါ.တဲ.။ ပြောတာကတော.ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပါပဲ အိုင်တီခေတ်ကြီးဆိုပဲ သူပြောမှ ချက်တင်မထိုင်
ကျွန်တော်တို.ရွာသားတွေလို ပို.စ်တင်လိုက် ဗဟုသုတလည်းရ စာရေးတဲ. အကျင်.လည်းဖြစ် ပိုက်ဆံလည်းရသေးတယ်ဗျာနော် ဒါကမှတော်သေးတယ်
သူငယ်ချင်းညီမလေး သင်ခန်းစာပေးပြီး ညီငယ်ညီမငယ်လေးတွေဆီကို မေးလေးတွေနဲ. ဖြန်.ပေးလိုပါတယ်
အရင်တုန်းက ရွာထဲ မှာ အဲ့လို ဆိုးညစ် ယုတ်မာ တဲ့ ယောက်ျားတွေ အကြောင်း ကို နာမည် နေရပ် မှတ်ပုံတင် နံပါတ် အလုပ်အကိုင် နဲ့ တစ်ကွ တင်ပြဖူးတာ ကို ဖတ်ဖူးတယ် ဗျာ ။ ဒါပေမယ့် လည်း လူအမျိုးမျိုး စရိုက်အမျိုးမျိုး ဆိုတော့က အဲဒီလို တင်ရုံနဲ့ တင် မလုံလောက်သေးတာတော့ အမှန်ပဲ ။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ အသိပညာမစုံသေးတဲ့ ညီမအရွယ်လေးတွေ ကို ကော ။ မသိကြသေးတဲ့ မမ တွေ ကို ကော အကုန် လက်လှမ်းမှီသမျှ အခု လို လိုက်ပညာပေး ရမယ် လို့ ထင်ပါတယ် ဗျာ ။ ကိုရွှေဘိုသား ရဲ့ အခုလို တင်ပြ ပေးမှု ကို တော့ အားပေးတယ်ဗျာ ကြိုက်ပါတယ် ထောက်ခံ ပါတယ် ဗျာ ။
ရွှေဘိုသား ပီသပါပေတယ်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်လို့ မပြောရဘူး။ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းကို ခွဲခြားတတ်ပါပေတယ်။
သဂျီးပြောသလို ချစ်တဲ့သူတွေ ချစ်ကြပါ.. ချစ်ပြီးရင် တူတူနေဖို့ ကြိုးစားပါဆို ဆို ဆို ဆို…….. ဆိုးးး ဆို ဆို….
အခုတော့.. တူတူ နေပြီးမှ.. နောက်၁နှစ်မှ လာပါဆိုတော့.. ကောင်မလေး သနားစရာပဲ..
လောကကြီးမှာ အလကားရရင်လိုချင်တဲ့ လူတွေကြီးပဲ..
မုန့် ဗန်း တခု ချထားပြီး မြည်းပါ ကြိုက်ရင် ၀ယ်ပါ ပြောကြည့်.. မြည်းတဲ့ လူတိုင်း ၀ယ်မသွားဘူး ၀ယ်သွားတဲ့ လူတိုင်း မြည်းချင်မှ မြည်းမယ်(အတော်ရှားပါတယ်)
သဂျီးတို့ အရပ်မှာ ပြောတဲ့ return ဆိုတဲ့ ဟာကြီး ထိထားတဲ့ ပစ္စည်းကို မသိလို့ မတတ်သာလို့ သာ ၀ယ်ချင်ဝယ်မယ် ပိုက်ဆံ ပေး ၀ယ်ရတာချင်းတူတူပဲဟာ.. သူများ မသုံးရသေးတဲ့ ပစ္စည်း အသစ်စက်စက်တော့ လူတိုင်း လိုချင်ကြတာပဲ
လောကကြီးမှာ ၀ယ်မစားပဲ နိုက်မြည်းမဲ့ အကောင်ကို သွားမြှောက်ပေးရင် မိန်းကလေးတွေ ဘ၀ပျက်ပြီး ကိုယ်ကျိုးနည်းယုံပဲ ရှိတော့မပေါ့။
ချစ်ပြီးတူတူနေကြ… အလိုမတူပဲတော့ မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့…။
မိန်းကလေးတွေက ဘ၀ပျက်တယ်ဆိုပြီး.. ဘာလို့ပြောရတာလည်း…
အိမ်ထောင်ကျပြီးရင်.. ယောက်ျားက လှေခါး၃ထစ်ဆင်းရင် လူပျိုဖြစ်သတဲ့..။
မိန်းမကတော့… အိမ်ရှေ့ ထွက်ရပ်ပြီး.. ထမီတခါလောက်ပြင်ဝတ်ပြလိုက်ယုံပဲတဲ့… သူငယ်ချင်းတယောက်ပြောပြတာ…
အမောင် သကောင့်သားများက ဤမျှလောက် သဘောထားကြီးတော်မူကြပါ သလော။
အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး ထမိန်ပြင်ဝတ်မဲ့ အစား အိမ်ရှေ့ထွက် ကြေးစည် ထု ပေးလိုက်မယ်.. မထင်…. မထင်… မထင်…..
ကိုယ်တကယ် ချစ်တဲ့သူဆိုရင်တော့ မြေးပဲရှိရှိ ….
ဗေဒင်ဟောလိုက်မယ်။ မောင်ကင်း ဘိုးဘွားရိပ်သာသွားရင်း အဖွားကြီးတစ်ယောက်ကို မျက်စပစ်ခဲ့တယ်။
Why, ကောင်မလေးက ဘာလို့သနားစရာဖြစ်ရတာလည်း, why ???
If he was not threatened to her,
If he got her consent/agreement,
Why, he was labelled/said as “ဆိုးညစ် ယုတ်မာ တဲ့ ယောက်ျား” ???
Even she is my real (blood) sister or daughter,
It’s quite OK for me, I don’t mind,
as long as she agree with that.
( အလိုမတူပဲတော့ မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့ )
ချက်တင်ထိုင်တာ အဝေးရောက်နေတဲ့မိဘတွေကိုတွေ့ရတယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။
တခါတလေလည်း စကားပြောရင်းနဲ့ တကယ်ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေတွေ့ရတယ်။
တခါတလေလည်း မအားလို့စကားပြန်မပြောဖြစ်တာကို ရင့်တာလား ဘာလားနဲ့ရန်တွေ့တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတယ်။
စကားပြောကြည့်ပြီးတော့ ဒီလူဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာ စီစစ်ပြီး ဆက်ပြောသင့်ရင်ပြောတယ်၊ မပြောသင့်ရင်လည်း Block / Remove လုပ်တယ်။
ကိုယ့်ဂျီတော့ထဲမှာတော့ ကိုယ်နဲ့စိတ်သဘောတူ ပြောလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့သူတွေပဲထည့်ထားတယ်။
ဒါပေမယ့် အထူးသတိထားရမှာက အလွယ်မယုံဖို့ပါပဲ။
Candy ရဲ့ gtalk ထဲမှာတော့ ဟာသပြောတတ်တဲ့သူငယ်ချင်းတွေများတယ်
ဒါဆိုရင် ဖေဂျီးက ဂျိုကာကြီးလားးး
ဒီနေရာ မှာ ၁၀ တန်အောင် ဖတ်ဖူးတဲ့ ဟာသလေး ကို ဖောက်သည် ချမယ် ဗျာ ။
တစ်ခါ က အာဖရိက မှာ ဆွေကြီးမျိုးကြီး ( တော်ဝင်ပေါ့ )မိသားစု ထဲ က သတို့ သား လေး ကို ပိုက်ဆံ ရှိမိသားစု တစ်စု က သမီးလာဆက် တယ်တဲ့ ။ ဒါနဲ့ သတို့ သား က ဘယ်လို ပြောသလဲ ဆိုရင် သတို့ သမီး ကို မိမွေးအတိုင်း ဖမွေးအတိုင်း အရင်ဆုံး စမ်းသပ်စစ်ဆေးကြည့်ရူ့ စစ်ဆေး မယ်တဲ့ ။ ပြီးမှ ယူမယ် လို့ အကြောင်း ပြန်လိုက်တယ် ။ သတို့ သမီး မိဘ တွေ လဲ အကျပ် ရိုက်သွားတာပေါ့ ။ ဒါနဲ့ နောက်ဆုံး သတို့ သား ရဲ့ ဆန္ဒ ကို လိုက်လျော လိုက်သတဲ့ ။ ဒီလို နဲ့ သတို့ သား နဲ့ သတို့ သမီး ကို အခန်း တစ်ခု တွင်းမှာ အချိန်အနည်းငယ် ထည့်ထားတာပေါ့ ။ ခဏကြာ တော့ သတို့ သား လောင်း ဟာ ပြန်ထွက်လာပြီး ဒီမိန်းကလေး ကို သူ လက်မထပ်နိုင်ကြောင်း ပြောသတဲ့ ။ ဘာလို့ လက်မထပ် နိုင်ရသလဲ လို့ အကြောင်းပြချက် မေးတော့ ` ကောင်မလေးရဲ့ နားရွက် က ပုံမှန်ထက် ပိုကားနေလို့ ပါတဲ့ ´ ။
မိဘတွေက သားသမီးတွေကို အရမ်းချစ်ကြလို့ပါ။ မျက်စိရှေ့က အပျောက်မခံ။
ကလေးတွေကို ၁၀ တန်း မအောင်မချင်း စာ မှာ စာ ၊ စာ ပြီးရင်း စာ၊
မနက်လဲ စာ ၊ နေ့လဲ စာ၊ ညလဲ စာ ကလေးတွေ စာ ကလွဲပြီး ဘာမှ မသိ
မိဘ နဲ့ လဲ ဝေးရော၊ မိဘ မျက်ကွယ် လဲ ရောက်ရော…..
ဒါမျိုး ကိစ္စ တွေ မဖြစ်အောင် ကြိုတင်စဉ်းစားတတ်အောင် ဆိုရင် ကလေးဘ၀ တည်းက ကလေးလို နေခွင့်ရဖို့လိုပါတယ်။
ချက်တင်မှာ ကြုချင်တဲ့သူ အချင်းချင်းတွေ့မှာဘဲ။
အဲတော့ ချက်တင်ကို အပြစ်မမြင်ပါနဲ့။
သုံးတဲ့လူကို ဘဲ အပြစ်တင်ရပါလ်ိမ့်မယ်။
တစ်ချို့ဆို စာတောင်ကောင်းကောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူး …. အပြင်မှာလျှောက်သွားမယ့်အစား အင်တာနက်ဆိုင်မှာလာပြီးတော့ အချိန်ဖြုန်းတယ် ….. ဘာမှမသိတော့ ဘေးကကောင်လေးတွေကိုဟိုမေးဒီမေးနဲ့ပေါ့ …. အနေကြာလာတော့ ရည်စားဖြစ်သွားရော …. အခုခေတ်ကအတည်ဆိုတာ ရှားတယ် …. မိန်းကလေးဘ၀ကသနားစရာပါဗျာ …. ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်တယ် တကယ်ယူမယ်ဆိုပြီး ပုံအောလိုက်မှ သစ္စာဖောက်ကြီးဖြစ်နေတယ်… ပြန်ပြင်လို့လည်းမရတော့ သဘောကောင်းတဲ့လူကြီး၊ ဦးလေးကြီးတွေ၊တစ်ချို့သူများယောက်ကျားတွေတောင်ပါသေးတယ် …. ကုလားတွေကိုလည်းယူကုန်ကြတာပေါ့ …
ဦးပေါက် ပြောတာ လက်ခံတယ်…. လက်ခုပ်ဆိုတာ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်တာပါ… မိန်းကလေးချင်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်… ဒါပေမယ့် မိဘတွေ အစ်ကိုတွေက ဆယ်တန်းအောင်ခါစ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို လူကြီးမပါဘဲနဲ့ ခရီးလွှတ်တာလား… သူနဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ဘယ်ရောက်နေလဲ…. ဆယ်ရက်လုံးလုံးနေနေတာ သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သဘောတူတာလား…. ပြောရရင်တော့ ဦးပေါက်ပြောသလိုပဲ လူတင်ပါလို့ နွားကျားကိုက်တာပါ….
G-talk နဲ့မဆိုင် ဖူး လို့ထင်ပါ တယ် ။ ကိုယ်ပိုင် အသိနဲ့ဆိုင်တယ်ထင် ပါတယ် ။ G-talk ဆိုတာ အသုံးချစရာ နည်းလမ်း တခုပါ ။ G-talk မပေါ်ခင်ကလည်း ဒီလိုအဖြစ်မျိုးရှိတာ ပဲမဟုတ်လား ။
မိန်းကလေးတွေ ခေတ်မှီချင်ကြတယ်ဆို အ၀တ်အစားတွေတွေပဲခေတ်မှီချင်နေကြတယ် အသိဥာဏ်တွေ ဆင်ခြင်ဥာဏ်တွေတော့ တိုးတက်အောင်မလုပ်ချင်ကြဘူး ဒီကိစ္စလဲ မစဉ်းစားလို့ မဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ရတာပဲ မိဘတွေနဲ့လဲဆိုင်တယ် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လဲဆိုင်တယ်
အရင်တုန်းကတော့ ယောက်ျားတွေကလဲ မိန်းကလေးတွေကို အဲလို မကြံစီကြဘူး လုပ်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုလဲ ဆိုးညစ် ယုတ်မာ တဲ့ ယောက်ျား လို့လူတွေကလဲ အပြစ်တင်ကြတယ် ခံရတဲ့မိန်းကလေးတွေကို သနားကြတယ်
ခုခေတ်မှာတော့ အဲလိုယောကျာ်းတွေက သာမန်ယောကျာ်းများဖြစ်လာပြီး မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ ဒီခေတ်မှာ ဒီလောက်တောင်မသိဘူးလား သူကိုယ်တိုင်ပါလို့ဖြစ်တာ တချို့ဆို နဲတောင်နဲသေးလို့ မသနားတော့တဲ့ အပြင် ၀ိုင်းဝန်းထောပနာပြုခံရမှာ ….
ခုခေတ်မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ ပိုပြီးဆင်ခြင် စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုလာဘီ ဒီကိစ္စမျိုးဖြစ်လာလို့ ကိုယ့်ကို စာနာသနားမဲ့လူထက် လက်ညှိုးထိုးမဲ့လူက ပိုများလာဘီ ကိုယ်က ချစ်လို့ ယုံကြည်လို့ ပေးလဲ ကိုယ်က မစောင့်စည်းတာ မထိန်းသိမ်းတာ နားမလည်လို့ အလို့ ခံလိုက်ရလဲ ကိုယ်ပဲ ပါချင်လွန်းလို့ အပါခံလို့ဖြစ်တာ… အဲလိုလုပ်တဲ့ ယောက်ျားအများစုအတွက်တော့ သူတို့ ပါလို့ ဖြစ်တာဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းနဲ့ သူတို့အတွက် ကာဗာလုပ်ဖို့ လုံလောက်သွားဘီ…
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပါပဲ။ ကိုယ်ကောင်းရင်ခေါင်းမရွေ့ပါဘူး။ မိမိကိုယ်မိမိ လုံခြုံအောင်ထိမ်းကြောင်းနိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ ပညာ အတွေးအခေါ် ဗဟုသုတ လိုပါတယ်။ gtalk ကိုချည်းပဲ အပြစ်တင်လို့တော့ မရပါဘူး။ အဓိကကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပါပဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချချိန်အယုံမလွယ်မိဘို့ အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ပျော့သူတွေ ၊အယုံလွယ်သူတွေ အထူးသတိထားဖိုို့ပါလိမ့်မယ်။
မီးဆိုတာ သုံးတတ်သူတွေအတွက်တော့ မိတ်ဆွေအဖြစ် တရက်တောင် ကင်းလို့မရပါဘူး ၊ မသုံးတတ်သူတွေအတွက်ကတော့ မီးလောင်ပြာကျသွားစေနိူုင်ပါတယ်။ gtalk ဟာလည်း ထို့အတူပါပဲ။
အဲ့ဒါတွေက ပြောရခက်တယ် နားမလည်တဲ့လူတွေသုံးနေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့
မိန်းခလေးဆိုတာ ကိုယ့်တာကို လုံအောင်ထိန်းမှတဲ့။ မိဘက သံကွန်ချာ ခုနှစ်ထပ်ကာထားလည်း ကိုယ့်စိတ်က ပါနေ၇င် တားမရပဲ ဖေါက်ထွက်ပါတယ်တဲ့။ ယောက်ကျားလေးက စချင်ရင်တောင် အခုမှ မြင်ဖူးသူကို ချက်ချင်းယုံတာတော့ အတော်ကို မိုက်မဲရာကျပါတယ်။ အဓိကကတော့ မိဘပါပဲ။ သားသမီးကို အရာရာသွန်သင်ထားသင့်တယ်။ မျက်ကွယ်မှာ ကြုံမှာကို ကြိုတင်တွက်ဆပြီး ဦးနှောက်နဲ့ အမှားအမှန် ချင့်ချိန်နိုင်အောင် သင်ထားသင့်တယ်။ နေရာတကာ လိုက်မကြည့်နိုင်တာမို့ စဉ်းစားဆင်ခြင်ဥာဏ် ထည့်ပေးထားမှ ဖြစ်မှာပါ။ ကြံတဲ့သူကလည်း ရမယ်ထင်လို့ကြံတာပါ။ ယောက်ကျားလေးတွေ ပိုသိပါတယ်။ မိန်းခလေးက ဘယ်လို အထာလည်း ဆိုတာကိုပါ။ စကားလိုက်ပြောတာ၊ မထိတထိစတာ တွေက သူတို့ စမဲ့သူကို လေ့လာပြီး ရမယ်ထင်လို့ လုပ်ကြတာပါ။ စကြည့်ပါတယ် စကားအပြန်၊ အမူအရာပြန်တာ တည်ကြည်ရင် ရှေ့မတိုးဝင့်ပါဘူး။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိသူကို ဘယ်လုပ်ရဲပါ့မလဲ။ သိက္ခာရှိသူ၊ ကိုယ့်တာကို လုံသူကို မစော်ကားဝင့်ပါဘူး။ လေးစားကြပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆို လူတွင်ပါလို့ နွားကျားကိုက်တာပါ။
ဒါမျိုးက အယုံလွယ်တဲ့လူတွေပဲ ခံရတာပါ… ။ ချက်တင်ကို တကယ့်ဘ၀လို့ ခံယူထားတဲ့ လူတွေ တပုံကြီးနော် … ။ ချက်တင်ထဲက လူနဲ့များ နှစ်ကိုယ်ထဲ တည်းခိုခန်းရောက်သွားတာ ဖြစ်သင့်လို့လား … ။ မသွားတတ်မလာတတ်လျှင် ဖုန်းတော့ ဆက်တတ်မှာပေါ့ … ။ပြောရလျှင် လိုက်ချင်လို့ကို လက်တည့်စမ်းပြီးလိုက်သွားတာပဲ ဖြစ်မှာ …။ မိန်းကလေးတွေကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို မထိန်းပဲ ချက်တင်ထဲမှာ ရင်းနှီးတာနဲ့ … တခါထဲ အပြင်မှာ လိုက်သွားစရာလား ။ ဒါကြောင့်လည်း ချက်တင်ကရေ ရာဇ၀တ်မှူတွေ ကျူးလွန်နေကြတာ … ။ etone တို့များ ပြောချင်တဲ့ပုံလာပြော… ကြမ်းပိုးကို လိပ်ဖြစ်အောင်ပဲ ပြောပြော … လုံးဝရင်မခုန်ဘူး ။ တဖက်နားက၀င် တဖက်နားက ပြန်ထွက်သွားရော …
မမ တုန်လိုမိန်းကလေးတွေ များများရှိရင်ကောင်းတာပေါ.ဗျာနော်
ပြောရမယ်ဆိုရင် ကျနော့ကိုတောင် အီစီကလီလာလုပ်နေသူတွေအများကြီးဗျ။
ဒါမျိုးက ကြားနေရတာတွေက အများသား ယုံတဲ့သူတွေကလဲ ဘယ်လောက်ပြောပြော ယုံနေကြတုန်း
ချက်တင်က မကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး မကောင်းတဲ့ သူတွေတော်တော်များများက ချက်တင်ထဲရောက်ပြီး အဲတာကို ခုတုံးလုပ် အကျိုးအမြတ်ထုတ်နေကြတာပါ ….
ဒါဆိုရင် သူကြီးအနေနဲ့လဲ ရွာထဲမှာ Chat Box တစ်ခုထားရမလိုဖြစ်နေပြီ…:)
အဆောင်က ကောင်းမလေးတစ်ယောက် Gtalk မှာ ကြိုက်တဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်နောက် လိုက်ပြေတာ. သူ့အမေ က အမွေဖြတ်လိုက်ရော.
ကျွန်တော်ရေးသော ခေါင်းစဉ် ကသိပ်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတွေးမိပါသည်
အမှန်က အသုံးချတဲ.သူအပေါ်မှာ မူတည်ပါသည်